Uyenza njani iFolda ye-imeyile kwiWindows Live Hotmail
Iifolda zemiyalezo ye-imeyile yindlela yokuhlela imiyalezo engenayo yeWindows Live Hotmail ukuze uzifumane ngokulula. Iifolda ze-imeyile zisebenza njengeefolda ezikwikhompyuter yakho; emva kokwenza enye, ungahambisa imiyalezo kwifolda ukuze ubeke imiyalezo efanayo kunye.
1Kwisahlulo sasekhohlo sefestile yeHotmail, cofa indawo ethi 'More Actions for Folders', kwaye ukhethe Lawula iiFolders kwimenyu ehlayo evelayo.
Xa ushenxisa isikhombisi semouse ngaphezulu kweefolda kwisahlulo sasekhohlo, kuya kuvela iIzenzo ezingaphezulu zeefolda. Ijongeka ngathi lilanga elincinci. Xa ucofa i icon, kuvela imenyu. Khetha Lawula iiFolders, kwaye uluhlu lweefolda zangoku ze-imeyile ziyavela.
Ifom entsha yeFolda iyavela.
3Ngenisa igama lefolda kwaye ucofe ku Gcina.
Ifolda entsha yenziwe kwaye yongezwa kuluhlu lwefolda kwicala lasekhohlo. Cofa kwifolda ukuveza imixholo yayo. Ukubuyela kwifolda ephambili ye-Hotmail, cofa i-Inbhoks.
Ukuba ufuna ukususa okanye ukunika igama kwakhona ifolda, ungasebenzisa iQamba ngokutsha kwaye ucime amaqhosha kwi Lawula iiFowulda iwindow ukwenza njalo.
4Ukuhambisa umyalezo ukusuka kwifolda ukuya kwifolda, khetha ibhokisi yokukhangela ngasekhohlo komyalezo kwaye ucofe u `` Hambisa ku '' igama lefolda.
Ungasa imiyalezo emininzi ngaxeshanye ngokukhetha iibhokisi zokukhangela kuqala, emva koko ukhethe uHambisa ku → igama lefolda.
Ungatsala imiyalezo ekhethiweyo kwenye incwadi ngokuyiwisa kululuhlu lweencwadi.
5Ukucima umyalezo kwifolda, cofa ibhokisi yokukhangela ukuze ukhethe, kwaye ucofe ku-Cima.
Ukuba ufuna ukumakisha umyalezo njenge-junk mail ukuze iWindows Live Mail ibeke nawuphi na umyalezo osuka kuloo mthumeli kwifolda yeJunk ukusukela ngoku, cofa ibhokisi yokukhangela phambi komyalezo kwaye ucofe iJunk.
ipravastatin sodium 40 mg
yintoni isiyobisi sesulfa
uyicoca njani ilaptop
isebenza ngokukhawuleza kangakanani ipakethi yedosi yokulinganisa
I-pantoprazole dr 40 mg